साउन १ देखि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल नेपालमा नचल्ने, यसरी गर्न सकिन्छ दर्ता ? - Dhangadhi Khabar
बुधबार ११, जेठ २०७९ ०५:२६
साउन १ देखि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल नेपालमा नचल्ने, यसरी गर्न सकिन्छ दर्ता ?
आगामी साउन १ गतेबाट विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेका मोबाइल फोनहरूलाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्न सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्र कसैलाई पनि सञ्चारविहीन बनाउने आफूहरूको उद्देश्य नरहेको बताउँछन् । प्राधिकरणको प्रणालीले 'डिटेक्ट' गरिसकेको मोबाइल फोन असार महिनापछि पनि चल्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ आउने मोबाइल फोनको हकमा भने दर्ता भएपछि मात्रै चल्नेछ।
कसरी गर्ने दर्ता
प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो वेबसाइटमा (nta.gov.np) मा गएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सेट दर्ता गर्न सक्छन्।
मिश्रका अनुसार नेपालमा विद्युतीय उपकरणको लाइफ (उपभोग गरिने औसत समय) ३/४ वर्ष निकालिएको छ।
मङ्गलबार २२, असार २०७८ ०१:०५ मा प्रकाशित